h 2.9 Naghachi ehichapụ faịlụ site SD kaadị
Adịkwa a otu faịlụ pụrụ nnọọ ịdị na-akụda mmụọ. Cheedị adịkwa a nchekwa na ọtụtụ dị mkpa faịlụ, ihe oyiyi, na ndị ọzọ na data. Files adịghị ga-efu nanị mgbe onye ọrụ deletes ha. Mgbe ụfọdụ, usoro malfunction na ike disks na-emerụ. Dabara nke ọma, ọ fọrọ nke nta ọ bụla ngwaọrụ (kọmputa, laptọọpụ, ọbụna gị smartphone) e mere nke mere na mgbe ị na-ihichapụ a faịlụ ọ na-adịghị ruo mgbe ebighị ebi.
Kọmputa na smartphones aka niile nke gị data na a n'ụzọ pụrụ iche. Ozugbo ị ihichapụ a faịlụ ma ọ bụ nchekwa, ọ na-adịghị akwụsị-adịgide adịgide. Usoro nanị kwudịrị na ha maka iwerekwa. The faịlụ na nchekwa anọ emebibeghị ruo mgbe ọhụrụ data na-edochi ha. Ọ bụ ya mere i kwesịrị agbali nchekwa mgbake ozugbo o kwere omume.
Mbụ n'ọnụ bụ, mgbe na-agbake ehichapụ faịlụ, jide n'aka na-naghachi ha ka ha ọzọ mbanye. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na mgbake pụtara rewriting faịlụ ka mbanye. Ma ọ bụrụ na ị na-agbake multiple faịlụ, ụfọdụ n'ime ha nwere ike inwe dekwasịzie n'oge mgbake usoro. I nwere ike ịzọpụta faịlụ na ị naghachi ọzọ diski ike, mpụga ike disk, USB mkpisi, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ mpụga ngwaọrụ.
Ọzọkwa, cheta na ọ fọrọ nke nta-agaghị ekwe omume na-agbake faịlụ site na n'ụzọ anụ ahụ mebiri emebi draịva. Ọbụna ihe ndị kasị oké ọnụ mgbake softwares ga-enwe ike iji naghachi faịlụ kpamkpam, ikpe naanị. Ebe a bụ ole na ole n'ime ndị kasị mma gosiri mgbake ngwaọrụ n'ihi na ị na-agbalị si.
Top atọ Ngwaọrụ N'ihi Ịchọpụta faịlụ na nchekwa
Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị kasị mma free faịlụ na nchekwa mgbake software, ọ ga-abụ Recuva. Nke mbụ niile, Recuva bụ nnọọ mfe iji. Niile i nwere ime bụ họrọ ma ị na-achọ a ụfọdụ faịlụ ma ọ bụ i nwere ike iṅomi faịlụ niile. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ ihe ndị ha chọrọ mbanye, ma ọ bụ ike iṅomi niile nke gị na kọmputa na draịva. Recuva akwado abụba, exFAT na NTFS faịlụ usoro.
Mgbe scanning draịva, Recuva ga-egosipụta niile faịlụ hụrụ (na ọnụọgụgụ n'ihi na ihe oyiyi). Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ ọrụ na onye-kọwaa iṅomi, mgbe ahụ họrọ elu mode. Advanced Mode-enye ndị ọzọ nhọrọ, dị ka Deep iṅomi. Ụfọdụ reviews mere egosiwo na Recuva bụ irè karịa ụfọdụ n'ime adịchaghị mgbake softwares si n'ebe.
Tupu anyị na-ekwu ihe ọ bụla banyere PhotoRec, adịghị esi Ujo site foto a. Ọtụtụ ọrụ na-abụrụ na PhotoRec n'ihi na nke DOS-dị ka interface. Ma, ị maara ihe ha na-ekwu - mgbe ekpe ikpe a n'akwụkwọ site na ya cover.
PhotoRec bụ nnọọ dị ike mgbake software nke nwere ike na-agba ọsọ site Windows, Linux, Mac OS X, Sun Solaris na ọbụna • FreeBSD, NetBSD, OpenBSD. Nke a software nwere ike na-arụ ọrụ na ọtụtụ nke faịlụ usoro na ngwaọrụ ụdị. The ihe ọmụma nke ihe karịrị 200 faịlụ formats eweta Ohere nke gị ịga nke ọma foto mgbake.
Mgbe ọ na-abịa usoro si mgbagwoju anya-na-achọ interface, nke bụ eziokwu bụ PhotoRec dị nnọọ mfe iji. The mmemme "esetịpụ aka gị" na-ejegharị gị site ọ bụla otu nzọụkwụ nke mgbake usoro. PhotoRec dabeere na arụmọrụ, ọ bụghị interface.
Ma mgbe ụfọdụ, freewares bụ ezughị. Ọ bụrụ na ị na-achọ otu n'ime ndị kasị dị ike mgbake ngwaọrụ e, mgbe ahụ, ị ga-nwalee Wondershare Data Recovery. I nwere ike ịgbalị usoro ihe omume maka free, na ọ bụrụ na ị na-amasị ya na ị nwere ike ịzụta ya maka naanị $39.90.
Gịnị bụ otú oké banyere Wondershare Data Recovery? Ọfọn, ka na-amalite na-akwado ngwaọrụ. Wondershare Data Recovery Akwado egweri biini, ebe nchekwa kaadị, ike draịva, mbughari draịva, flash draịva na ọbụna dijitalụ ese foto / camcorders. Ya mere, ihu ọma ọ na-akwado bụla ngwaọrụ e nwere.
Wondershare Ga-enyere gị naghachi gị ehichapụ nchekwa n'oge na-adịghị n'ihi na nke dịgasị iche iche nke na-akwado ụdị faịlụ. Nke a undelete ngwá ọrụ ike naghachi niile akwụkwọ faịlụ, foto, video, audio, Archive faịlụ na ọbụna ozi na ozi ịntanetị.
Wondershare Data Recovery Ga-bụghị naanị naghachi nchekwa na faịlụ ehichapụ site na mberede, kamakwa faịlụ nke na-ehichapụ n'ihi na-ezighị ezi na ime ihe, kọmputa nje, na diski ike mkpọka, ma ọ bụ ọbụna ezughi ezu nkebi Ọdịdị.
Ugbu a, anyị nwere ike mgbagwoju anya gị. Ọ bụrụ na ị na mberede ehichapụ a nchekwa bụghị otú ogologo oge gara aga, mgbe ahụ, a free software bụ nhọrọ ziri ezi n'ihi gị. The Ohere inweta bụ na gị faịlụ ga-gbakee. Free softwares dị ka Recuva na PhotoRec akwado a otutu faịlụ na ụdị. Recuva bụ free na mfe iji, mgbe PhotoRec bụkwa free, ma ọ pụrụ anya mgbagwoju anya n'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ. Ndị a softwares nye mfe (free) ụzọ.
Ma, ọ bụrụ na freewares apụghị ịchọta gị nchekwa na faịlụ, ma ọ naghachi ya nke ọma, ọ bụ ebe Wondershare Data Recovery nzọụkwụ ke. Ọ na-akwado ndị ọzọ filetypes, na ọ bụ ndị ọzọ mepere emepe na irè karịa free softwares. Nke a na usoro nwere ike naputa faịlụ na nchekwa na-ehichapụ ọbụna a afọ gara aga.
Mac ọrụ ga-emechu ihu mgbe na-agụ ndị na-esonụ n'ụlọ mkpọrọ. Recuva na PhotoRec adịghị akwado Mac OS X. Ma, echegbula ka nwere ọtụtụ free undelete ngwaọrụ nke gị usoro.
Otú ọ dị, Wondershare Data Recovery akwado Mac OS X. a bụ mfe nkuzi maka Mac ọrụ na-esi naghachi faịlụ ehichapụ Mkpofu iji Wondershare.
Nzọụkwụ mbụ bụ na-ahọrọ Lost File Iweghachite nhọrọ. Nke a na nhọrọ weghachiri faịlụ site na a nkebi (ma ọ bụ ọbụna a mbughari media), n'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ọ ehichapụ site Comman + ihichapụ ma ọ bụ sitụbeghị ahịhịa.
Mgbe ahụ, ike iṅomi ndị chọrọ draịva, ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu mbanye na gị Mac.
Mgbe iṅomi risịrị, niile nke gị ehichapụ faịlụ ga-edepụtara na mbụ ha ụzọ. Faịlụ na ị sitụbeghị Mkpofu nọ "Mkpofu" nchekwa. Ọ bụrụ na ị na-echeta faịlụ aha, ị nwere ike ịchọ ya na search mmanya.
The ikpeazụ nzọụkwụ bụ ịzọpụta faịlụ na ọzọ disk ma ọ bụ nkebi.
5 Android App-enyere gị aka naghachi ehichapụ faịlụ
> Resource> Naghachi> 3 Ụzọ naghachi ehichapụ nchekwa